QIRASHO: Robert Lewandowski Oo Si Daacadnimo Leh U Soo Bandhigay Sababtii Dhabta Ahayd Ee Ay Kooxdiisa Bayern Munich Guuldarada Ugala Kulantay Liverpool. - GOOL24.NET
QIRASHO: Robert Lewandowski Oo Si Daacadnimo Leh U Soo Bandhigay Sababtii Dhabta Ahayd Ee Ay Kooxdiisa Bayern Munich Guuldarada Ugala Kulantay Liverpool.
Gool dhaliyaha kooxda Bayern Munich ee Robert Lewandowski ayaa si aan gabasho lahayn u soo bandhigay sababtii dhabta ahayd ee ay xalay kooxdiisa Bayern Munich guuldarada ugala kulantay Liverpool wuxuuna cadayn buuxda ka bixiyay wixii Liverpool ka caawiyay in ay guushii taariikhiga ahayd soo gaadhay.
Robert Lewandowski oo ka mid ah gool dhaliyaasha aduunka ugu fiican ayaa awoodi waayay in 180 daqiiqo in ka badan uu wax gool ah kaga dhaliyo Liverpool ee labadii kulan ee Anfield iyo Allianz Arena wuxuuna sharaxaad ka bixiyay sababtii uu kulamadan ugu dhibtoonayay.
Ugu horayn Robert Lewandowski ayaa cadeeyay in ay kooxdiisa Bayern Munich ku fashilantay in ay ciyaar furan la ciyaarto Liverpool wuxuuna macalinkiisa ku duray in uu awooda saaray difaacasho labadii kulan ee Champions league wuxuuna sidoo kale cadeeyay in uu kali ku ahaa weerarka Bayern oo ay difaaca Liverpool dhibaato ku noqdeen.
Robert Lewandowski oo kadib kulankii Allianz Arena saxaafada la hadlayay ayaa yidhi: “Dabcan waanu ogayn in uu noqonayo kulan adag, laakiin waxaan filayaa in labada kulanba aanu ku ciyaarnay difaacasho aad ah. Iskumaanu dayin in aanu weerarka ku riixno oo aanu xaalado abuurno, maanta iyo kulankii horeba”.
Robert Lewandowski oo sharaxaad ka sii bixinaya sababtii ay Liverpool guuldarada ugala kulmeen iyo waxa ka maqnaa ayaa yidhi: “In badan halis maanu qaadan, guriga ayaanu ku ciyaarnay, kulan kayagii ayuu ahaa, laakiin taas ayaan filayaa in ay anaga noo garaacday Liverpool.Si aad ah ayaanu khadka dhexe ugu ciyaarnay, halista maanu qaadan, anigu sababta ma garanayo”.
Intaa kadib Robert Lewandowski ayaa soo bandhigay sidii uu ugu dhibtooday difaaca Liverpool ee ay kooxdiisuna uga caawin wayday wuxuuna yidhi: “Waxaanu isku daynay in aanu riixno Liverpool, laakiin mararka qaar waxa uu weerarku ahaa 2 ka dhan ah 4 ciyaartoy , waana taas sababta aanaan wax badan u samayn. Maanta kubbado badan oo sare ayaan haystay, wax aad u adag ayay ahayd sababtoo ah kaliday ayaan ahaa.Haddii aad kali ku tahay laba ama saddex ciyaartoy, waa wax adag in aad ciyaarto”.
Virgil Van Dijk iyo Joel Matip oo ah laba ciyaartoy oo joog ahaan dheer ayaa awooday in ay Robert Lewandowski halkiisa ku aamusiiyeen isaga oo aan wax fursado badan ah ka helin kulankii Allianz Arena halka kulankii Anfield ay Matip iyo Fabinho awoodeen in ay xidiga reer Poland cidlo ku qabteen.
Liverpool ayaa hadda sugi doonta kooxda ay siddeed dhamaadka UEFA Champions league ku aadi doonaan iyada oo kooxaha Barcelona, Juventus, Man City iyo Man United ay yihiin kooxaha ugu xoogan ee ay isku dhici karaan.